ကိုရုပ်ဆိုး ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ: May 2008
အော်ပီကျယ်၏ လက်ရာများ (၁)
Scroll Box ပြုလုပ်ခြင်း
If someone feels that ...
If we cannot love ....
သေအတူ ရှင်မကွာ ...
ဒုက္ခိတ ပျားတုတ်တဲ့နေ့ (မေလ ၂-၃၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်)
မေလ (၂၃)ရက်နေ့မှာ ကွမ်းခြံကုန်း၊ ဒေးဒရဲ၊ ဖျာပုံ အထိသွားရောက် လှူဒါန်းပြီးပြန်လာတော့ အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာ အလိုမကျမှုတွေ ကိန်းအောင်းပြီးပြန်လာခဲ့ရတယ်။ အလိုမကျမှုဆိုတာ ”ဒီလူတွေလောက်ပဲ လှူဒါန်းပြီး တာဝန်ကျေပြီလားဆိုတာပါ”။ မကျေနပ်ဘူး။ နောက်တကြိမ် .. နောက်တစ်နေရာကိုသွားကို သွားဦးမယ်။
ဒီလိုပဲ စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ ပြန်ရောက်ပြီး နောက်တနေ့ မုန်းတိုင်းခံ ဒေသက လူတစ်ယောက်ရယ်၊ ရုံးကလူတစ်ယောက်ရယ် လေ့လာရေးခရီးအရင်သွားတယ်။ သူတို့ပြန်လာတာနဲ့ ဘယ်ရွာသွားမယ် ...၊ ဘာတွေလှူမယ်ဆိုတာကို ၀ိုင်းဝန်းစဉ်းစားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ၀ယ်တယ်၊ ထုပ်ပိုးတယ်၊ ကားငှားတယ်၊ .......၊ ......၊ .....၊ ..... တယ်။ ကဲ တော်တော်များများစုံပြီ။ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ကြက်သွန်၊ ပဲ၊ ဆေး၊ ဖိနပ်၊ အမိုးအကာ၊ စားစရာ၊ သဘက်၊ ... စတာတွေဝယ်ပြီးပြီ။ မနက်ဖြန်မနက် ၆း၀၀နာရီ စထွက်မယ်။ ကားနဲ့ ကွမ်းခြံကုန်းအထိသွားပြီး၊ အဲဒီကနေတဆင့် မော်တော်နဲ့ ၁း၃၀ လောက်ဆက်သွားရင် ရောက်ပြီ။ ပြန်လာမှ ပုံတွေ တင်မယ်ဗျာ။ မိုးထဲရေထဲ သွားရမှာဆိုတော့ ရန်ကုန်သားတွေ နည်းနည်းတော့ကြောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် နာဂစ်ရှေ့မှာ ဦးမော့လို့ ရောက်အောင်ကိုသွားမယ်။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား12:41 PM 1 ထင်မြင်ချက်(များ)
အောက်ပါ link များကို နှိပ်၍ ဖတ်ကြည့်ပါ။
1) Psych 1st Aid-Supporting Well-Being
2) Resilience For Kids and Teens - Guide For Parents and Teachers
3) Tips for Helping after Disasters - Adolescent
4) Tips for Helping after Disasters - Preschool
5) Tips for Helping after Disasters - School Age Children
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား11:17 AM0ထင်မြင်ချက်(များ)
E-mail ပေါ်မှာ ပျံ့နေတဲ့ ဟာသလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ကွန်ပျူတာ ဘာသာစကားတွေကို မြန်မာလိုဘာသာပြန်ဖို့ အခက်အခဲရှိတာရယ်၊ အနီးစပ်ဆုံးပြန်ရင်တောင် ရယ်စရာမကောင်းတော့မှာကို တွေးပူပြီး မူရင်းအတိုင်းဖော်ပြပေးလိုက်တယ်။
Starting the day withaconversation betweenawife andahusband whohappens to beasoftware engineer.
Wife :Do you love me or do you only love computers or are you just being funny?Husband :Too many parameters ...
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား1:17 PM0ထင်မြင်ချက်(များ)
လူတော်တော်များများ တကွက်ဟာသ၊ သရော် ကာတွန်းတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်။ ကျနော်လည်းအပါအ၀င်ပေါ့။ ကျနော့ဆီမှာ ရှိတဲ့ ”အော်ပီကျယ်ကာတွန်းများ-တတိယအစု”ထဲက ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကို ရွေးပြီးတင်ပေးလိုက်တယ်။ နောက်ထပ် ကျနော့အနေနဲ့ email ကနေတဆင့် ရောက်ရောက်လာတဲ့ Internet Funny Jokes (Cartoon or Text) တွေကို blog မှာ တင်ချင်တယ်ဗျာ။ လူတိုင်း ဖတ်ဖူးကြပေမယ့် တစုတစည်းထဲ Blog တခုထဲမှာ ဖြစ်စေချင်လို့ပါ။ ထင်မြင်ချက်လေးတွေလည်း ပေးခဲ့ကြပါဦး။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား2:33 PM3ထင်မြင်ချက်(များ)
အညွှန်း : အော်ပီကျယ်ကာတွန်း
Myanmar Blogger Helpdesk က ကိုရန်အောင် က ဒီလို ညွှန်းထားပါတယ်။
Original Post က ဒီနေရာ လေးမှာပါ။
ချစ်လှစွာသော သမီးနှင့် သား
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား2:15 PM0ထင်မြင်ချက်(များ)
အညွှန်း : ဘလော့ဂ် ဒီဇိုင်း
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ (၁၇ မေ၊ ၂၀၀၈)မှာ ကွမ်းခြံကုန်း၊ ဒေးဒရဲ ဖက်ကို ကျနော့်ရုံးကအဖွဲ့နဲ့ သွားခဲ့တယ်။ ဒုက္ခရောက်နေတုန်း လူတွေအများကြီးပဲ။ အဲဒီနေ့က နည်းနည်းပဲ လှူဒါန်းနိုင်တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဘူး။
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ထပ်ချလိုက်တယ်။ နောက်တကြိမ် ပစ္စည်းများများနဲ့ ထပ်သွားကြမယ်လို့။ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်ကတည်းက ဖုံးတွေဆက်၊ လူကိုယ်တိုင်သွားပြီး နိုးဆော်လိုက်တဲ့အခါ
(၆) ပန်းကန်ခွက်ယောက်များ (လတ်တလော မ၀ယ်ရသေး)
စသည့် စသည့်ဟာများကို ကောက်ခံရရှိပြီး၊ သောကြာနေ့ (၂၃ မေ၊ ၂၀၀၈) နံနက် ၆း၀၀နာရီကစပြီး သွားကြမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ခရီးစဉ် အသေးစိတ်နဲ့ လှူဒါန်းသမျှကောင်းမှုအစုစုကို သွားလှူပြီးမှ ထပ်တင်ဦးမယ်။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား1:03 PM0ထင်မြင်ချက်(များ)
ဟား ဟား ဟား ရလည်း မရဘူးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။၀မ်းဗိုက်ရဲ့ နေ့လည်စာတောင်းဆိုချိန်ကိုတောင် ကျော်လွန်ပြီး Blog အမျိုးမျိုးကိုဖတ်၊ Google မှာမွှေနဲ့ နောက်ဆုံးအောင်မြင်သွားတဲ့အခါ ၀မ်းလည်းသာသလို၊ လမ်းစဖော်ပေးတဲ့ ရွှေပြည်သူရော၊ တခြား ညီအကို blogger များကိုကော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။စမ်းသပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က blog တွေမှာ ဖတ်ပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ် ခင်ဗျာ။
သူမက ပြောတယ် အလှဆုံး အ၀တ်အထည်များ တဲ့။ နောက်ပြီး ”ကိုယ့်အတွက်တော့ ဘီဒိုရဲ့ဟိုးထောင့်ဆုံးမှာ ထည့်ထားတဲ့ သာမာန်အင်္ကျီလေး တစ်ထည် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါလေးက သူတို့အတွက်တော့ အခုချိန်မှာ အအေးဒဏ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကို ကာကွယ်ပေးမယ့် တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ် ဆိုတာကို အမြဲသတိရပေးပါနော်...”ဒီ post လေးကို ရေးသားထားတဲ့ ညီမငယ် ရွှေပြည်သူ အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ မူရင်းရေးသားသူရဲ့ blog ထဲကို ၀င်ရောက်လေ့လာ ဖတ်သားဖို့အတွက် link လေး ထည့်ပေးလိုက်တယ်။သွားရောက်လည်ပတ်ကြည့်ပါ။ကျေးဇူးပဲ ရွှေပြည်သူ။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား11:56 AM0ထင်မြင်ချက်(များ)
တဆင့်တဆင့် ကူးယူဖော်ပြပေးပါ။ စာအုပ်ငယ်များပြုလုပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြန့်ချိပေးနိုင်သည်အထိ ကူညီပေးပါ။ (“ရွှေပြည်သူ”ရဲ့Blog က ကူးယူဖော်ပြတာပါ။ မူရင်းရေးသားသူကိုရော ညီမငယ် ရွှေပြည်သူ ကိုပါ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
အမှန်တကယ် အကူအညီပေးနိုင်သည့် အကြောင်းရင်းမရှိဘဲနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည့် နေရာအား မသွားပါနှင့်။
အမြဲတမ်း သတိရှိပါ။ (လှေစီးလျင် မီးကြိုးများ ရေထဲထိနေခြင်း ရှိမရှိစသည်။)
ရေကြီးနေသည့် အဆောက်အဦးများအတွင်းသို့ အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု ထင်လျင် လုံးဝမ၀င်ပါနှင့်။
ရေကြီးရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ရေစီးကြောင်းများအတွင်း ကယ်ဆယ်ရန်မလိုအပ်ဘဲနှင့် လုံးဝ မသွားပါနှင့်။ ထိုရေများအတွင်းတွင် ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှား မြောက်မြားစွာပါဝင်ပြီး ထိခိုက်ရာမှ ရရှိသော အပွန်းအပဲ့ များအတွင်းသို့ပင် ရောဂါပိုးဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ရေစီးကြောင်းများ၏ အနက်နှင့် ရေစီးအရှိန်သည် ထင်ရသည်ထက် များစွာပိုပါသည်။ ထိုရေစီးကြောင်းများအတွင်း ကူးခတ်ရန် လုံးဝမကြိုးစားပါနှင့်။
တိရိစ္ဆာန်များအား ကယ်တင်လိုပါက လှေငယ်ကလေးများအား လုံးဝအသုံးမပြုပါနှင့်။
ခြံစည်းရိုးအစရှိသည် နောက်တွင် ပိတ်မိနေပါက ပိတ်နေသည့် အတားအဆီးများကိုသာ ဖယ်ရှားပါ။
အစားအသောက် ပေးလှူလိုသည်ဆိုလျင် အောက်ပါအချက်များအား စဉ်းစားပါ။
ကလေးများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် လိုအပ်သောအစားအစာများဥပမာပေးထားသည့် အစားအစာများမှာ - စည်သွပ်ဘူးများ ၊ အသား၊ ငါး၊ အသီးအရွက်နှင့် ဖျော်ရည် နို့အစရှိသည်။ ကယ်လိုရီနှင့် စွမ်းအင်များစွာပါသော အစားအစာများမှာ Peanut Butter, ဂျယ်လီ၊ မုန့်ကြွပ် နှင့် တောင်တက်သမားများ အသုံးပြုကြသော မုန့်ခြောက်များ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ရယ်ဒီမိတ်ကော်ဖီ၊ ချိုချဉ်၊ ဘီစကွတ်စသော မုန့်များကို စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျစေရန်အတွက် စားသုံးနိုင်ပါသည်။ ဗီတာမင်ဆေးပြားများနှင့် ပရိုတိန်းအစားထိုး ဆေးပြားများကိုလည်း ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
အစေ့မှရသည့် အစားအစာများ (ဆန်နှင့်ပဲအစရှိသည်)သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြုံတွေ့နေသူများအနေနှင့် ထိုကဲ့သို့သော အစားအစာမျိုးကို ပြင်ဆင်မှုပြုရန်မှာ ခက်ခဲလှပါသည်။
လူတစ်ဦး သောက်သုံးရန်နှင့် အစားအစာအတွက် ပြင်ဆင်ရန် တစ်နေ့လျင် အနည်းဆုံး ရေ (၁) ဂါလန် လိုအပ်ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်သယ်များ၊ ကလေးငယ်များ၊ အသက်အရွယ်ကြီးသူများနှင့် လူမမာများ အတွက် လိုအပ်ချက်မှာ ထို့ထက်ပိုပါသည်။ ပလပ်စတစ်ပုလင်းများနှင့် ပုံးများအတွင်းတွင် ရေကိုသိုလှောင်ထားပါ။ သဘာဝဘေးဒဏ်ခံနေရသည့် ကာလတစ်လျောက်လုံး အတွက် အနည်းဆုံး (၃)ရက်စာ ရေရှိနေရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရေသန့်စင်ရန်အတွက် ရေသန့်ဆေးပြားများနှင့် Chlorine bleach အား အနံ့ထည့်မထားပါက အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ရောစပ်ရမည့် အချိုးအစားမှာ တစ်ဂါလန်လျင် ၁၆စက် ၊ သို့မဟုတ် ရေ ၅ ဂါလန်အား Bleach လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း ရောစပ်ပြီး သမစွာမွှေလျင် ထိုရေအားသောက်သုံးနိုင် ပါသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်များရှိ ကုန်စုံဆိုင်များတွင် လွယ်ကူစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ရေကူးကန်များတွင် အသုံးပြုသည့် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက်နှင့် ကလိုရီနိတ်တက် လိုင်းမ် အစရှိသည် တို့ကိုလည်း ရေသန့်စင်ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အိမ်သာဘယ်လိုဆောက်မလဲ - ရေဆိုးလိုင်းများ ပေါက်ကွဲ ပျက်ဆီးကုန်လျင် အိမ်သာအတွင်းသို့ ပလတ်စတစ်အိတ် ခံကာ အခင်းသွားပါ။ အိမ်သာအိုးလဲ သုံးမရအောင်ဖြစ်နေပါက အဖုံးပါသည့် ပလတ်စတစ်ပုံးအတွင်းသို့ ပလပ်စတစ်အိတ်ခင်းကာ အခင်းသွားနိုင်ပါသည်။ ထိုင်စရာအတွက် ထိုပလတ်စတစ်ပုံး အပေါ်တွင် ပျဉ်ပြားနှစ်ချပ် ကန့်လန့်တင်ကာ ပြုလုပ်ယူနိုင်ပါသည်။ အခင်းသွားပြီးလျင် ဆပ်ပြာမှုန့်ခတ်ပြီး အဖုံးကို လုံအောင် ပိတ်ထားပါ။ စွန့်ပစ်လိုပါက ကြွက်၊ အစရှိသည်တို့ တူးဖော်ခြင်း မပြုနိုင်ရန် မြေမြုပ်ပစ်ရပါမည်။ ရေတွင်းရေကန်အစရှိသည်တို့နှင့် ဝေးရာတွင် စွန့်ပစ်ရန်သတိပြုပါ။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား11:39 AM0ထင်မြင်ချက်(များ)
then it means they had never triedanew thing in their life ...
လူတယောက်ဟာ သူ့ဘ၀မှာ အမှားတခါမှ မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူးလို့ ခံစားမိခဲ့ရင်,
အဲဒါက သူဟာ တခါမှ လမ်းသစ်ထွင်ဖို့ မကြိုးစားခဲ့ဖူးဘူးလို့ ဆိုလိုတာပဲဖြစ်တယ်။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား10:14 AM0ထင်မြင်ချက်(များ)
အညွှန်း : အဆိုအမိန့်
a) Know more than others ...
b) Work more than others ...
c) Expect less than others ...
အောင်မြင်မှုအတွက် သော့ချက် (၃)ခု
က) သူများထက် ပိုသိအောင်လုပ်ပါ
ခ) သူများထက် ပို အလုပ် လုပ်ပါ
ဂ) သူများထက် မျှော်လင့်ခြင်း (ပြန်ရလိုမှု) နည်းအောင် နေပါ။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား10:05 AM0ထင်မြင်ချက်(များ)
how can we love God whom we cannot see ...
မြင်နေရတဲ့ လူတွေကိုသာ သင် မေတ္တာစိတ်မရှိခဲ့ရင်,
မမြင်နိုင်တဲ့ ဘုရားသခင်ကို ဘယ်လို မေတ္တာထားမှာလဲ ...
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား9:55 AM0ထင်မြင်ချက်(များ)
သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ အညွှန်းအရ နိုင်းနိုင်းစနေ ရဲ့ blog ကို ၀င်ကြည့်တဲ့အခါ အရမ်းကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးတပုံကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ နိုင်းနိုင်းစနေ ပြောသလိုပါပဲ ”ကရုဏာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပါ ... ကြောက်စရာမကောင်းပါဘူး ...”အမေတယောက်က သူ့ကလေးတွေ လေနှင့်အတူ လွင့်ပါမသွားအောင် လက်တွေကို ကြိုးနဲ့ခိုင်အောင်ချည်နှောင်ပေးထားခဲ့ပေမယ့် ...အားလုံးအတွက် ဓါတ်ပုံလေးကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ”ကိုယ့်ကလေးတွေသာဆိုရင်” ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး ကျနော် တွေးကြည့်မိတဲ့အခါ ... ... ;::(
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား9:39 AM0ထင်မြင်ချက်(များ)
ကျေးဇူးရှင်များသို့ … …
ဘ၀မှာ မိစ္စာစိတ် မများ
ခိုကိုးရာက မဲ့၊ စားစရာက ချို့တဲ့
ဘယ်လို ကံကြမ္မာမျိုးကြောင့်လည်းကွယ် …။
မနက် နေထွက်တော့ ဘယ်မလဲ ...
ထွေးညိုရေ …၊ အရီးတုတ်ရေ …၊ ဘကြီးမြရေလို့
သုသာန်တစပြင် အလားပဲလေ ...။
နီနာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မာလာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နာဂစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်
နောက်တကြိမ် လာခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ဖြင့်
မြို့ပြရဲ့ အလှ ပျက်သုန်းပါစေ …
ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေ ပျက်စီးပါစေ …
ပြုံးပြုံးကြီး ဖလှယ်ရက်ပါတယ် …။
သုခကိုခံစား ဘုံအမြင့်မှာ စံစားပါစေလို့
အထက်ပါ ဓါတ်ပုံအား media.theaustralian မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှာ3း:06 PM0ထင်မြင်ချက်(များ)
“ဒုက္ခိတ ပျားတုတ်တယ်“ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးကို အမှတ်မထင်ရှိခဲ့တာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ခံစားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုပြန်ပြောရမလဲဆိုတာ မသိခဲ့ရိုးအမှန်ပါ။ မုန်တိုင်းသတင်းကို ကြိုတင်သိပေမယ့် တခါမှမကြုံဖူးတော့ ည ၈း၃၀ လောက်မှ အိမ်ကိုပြန်ဖြစ်တာပါ။ နာဂစ် တော့ မလာဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ ထင်ပြီး၊ စောစောအိပ်ယာဝင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် လာမယ့် လာတော့လည်း မတိမ်းမစောင်း ဗိန်းမောင်းနဲ့ပါ။ တစ်ညလုံး ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရပြီး၊ မျက်စိနှစ်လုံးမပိတ်ရဲလောက်အောင်ပဲ။ တချက် တချက် သွက်သွက်ခါသွားတဲ့ ၆-ထပ်တိုက် အပေါ်ဆုံးမှာ ဘယ်မှမသွားရဲ၊ မလာရဲနဲ့ပါ။ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ကြောက်လန့်ခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်ကို အားကောင်းမောင်းသန်ကြီးဆိုပြီး အထင်ကြီးပြီး မှီတွယ်နေတဲ့ ဇနီးမယားနဲ့ သမီးသားတို့ရှေ့မှာ ဟန်လုပ်ကာနေ နေခဲ့ရပြီး။ ထ တောင် မထရဲခဲ့ဘူး။ (ထလိုက်ရင် ဒူးတုန်နေတာ လူမိသွားမှာစိုးလို့ :) ) အခုမှ ရယ်နိုင်တာပါ။ နောက်မှ ဆက်ပြီး ပုံနဲ့တကွ တင်အုံးမယ်။ အခုတော့ Myanmar Teleport ကိုယ်တိုင် နာဂစ် စာ မိထားတာဆိုတော့ ဖွတ်ချက်၊ ဖွတ်ချက် connection လေးနဲ့မို့ ...............